Ukuhamba ngololiwe yeyona ndlela ilungileyo yohlobo lwe-Eco yokuhamba eYurophu. Eli nqaku ibhalwe ukuba afunde Train Travel yi Gcina A Isitimela, the Amatikiti amaThengi angabizi kakhulu kwiWebhusayithi.
Emini kunye neeyure zokutshona kwelanga, IBudapest yeyona nto inomgangatho oqinisekileyo ngezinto zayo ezintle ezithandekayo zokwakha kunye neesayithi. Njengoko uzulazula ezitratweni, Amehlo akho anokugcina umkhondo emva kweyona miqondiso mihle yaseYurophu. kodwa, ebusuku uyakufumana elinye ilizwe, Ilizwe elinezakhiwo ezingaphiliyo liguqukela kwimimandla engaqhelekanga yaseYurophu, kwaye le meko ikhethekileyo ibeka iBudapest kuthi 5 ezona zixeko ziqela.
Ngelixa amaDatshi akhetha iindibano eziphantsi, ukuba ubuza abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela, bangathi iAmsterdam inelinye icala. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, e Amsterdam, Uyakufumana izandi zokuzithambekisa kwiiklabhu ezininzi, kodwa kwakhona umculo live. Imibukiso ebukhoma idume kakhulu eAmsterdam.
Isixeko sonke esisaziyo ngenxa ye-opera yayo engazange ibonwe ngaphambili kunye nenkcubeko yayo inobomi obumnandi nobumnandi ebusuku. Ngokuchasene nezinye izigcawu zobusuku basebusuku kumazwe aselumelwaneni, indawo yasebusuku eVienna inobuhlobo kwaye ihlaziyeke ngakumbi. Umzekelo, umrhumo wokungena eVienna uphantsi kunye nemigaqo-nkqubo yokubuyela emnyango.
Umrhumo wokungena uhluka kwilizwe ngalinye. Uninzi lweedolophu zaseYurophu zixabiso eliphantsi kakhulu, umzekelo, I-Prague kunye neBudapest, 5-20 Ukungena kwee-euro kunye notywala ngamaxabiso afanelekileyo, ezinye iindawo zibiza kakhulu, kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu, Ufike kwangoko, ke awuzukuma ixesha elide kulayini.
Ngaba uyafuna ukusibetisa iposti yebhlog yethu "I-5 Cities Party Cities in Europe" kwisayithi lakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-party-cities-europe/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)